Sida ay sheegayaan warar xan ah AssistiveTouch on Apple Watch waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo muraayadaha Apple | Waxaan ka socdaa mac
Ku dhawaaqida Taageerada on Apple Watch waxay farxad weyn ku abuurtay dadka naafada ah ee mootada, inteenna kalena waxaan xiiseyneynaa inaan aragno sida shaqooyinka qaarkood ay u caawin karaan dadkan iyo kuwa kale oo badan iyagoo nolosha u fududeynaya qof walba. Hadda, mid falanqeeye ah ayaa aaminsan inaan kaliya fiirineyno cirifka cirifka marka la eego adeegsiga muuqaalkan gaarka ah. Apple waxay u badan tahay inay u isticmaasho tikniyoolajiyadda sidii hab lagu xakameeyo muraayadaha Apple.
Falanqeeye Neil Cybart ayaa aaminsan in Apple ay u badan tahay inay u adeegsato tikniyoolajiyad qaab ay ku xakameyso muraayadaha mustaqbalka ee shirkadda. Apple ayaa ka yaabisay qof walba markii ay soo bandhigtay AssistiveTouch oo loogu talagalay Apple Watch. Teknolojiyada, taas oo ku saleysan isku dhafan dareemayaal iyo teknolojiyad Si Apple Apple loogu rogo farta ama farta fiiqista gacanta, waxaa loogu talagalay kuwa u baahan marin dheeri ah. Dabcan, tikniyoolajiyaddu waxay yeelan kartaa kiisas kale oo adeegsi ah waqti ka dib, sida xakamaynta muraayadaha casriga ah.
Fikradda ah inaan uga tagno cududdayada dhinac u jilicsan dhinaca jilitaanka iyo istcimaalka astaamaha gacanta ayaa u muuqata inay tahay hab fiican oo lagu xakameeyo muraayadaha Apple ama wixii la mid ah waa layaab. Dabcan, tani waxay u baahan tahay qof inuu iska yeesho Apple Watch iyo muraayadaha isla astaanta, sidaas darteed ma noqon karto ikhtiyaarka kaliya ee xakamaynta, laakiin waxay macno u tahay talo ahaan. Intaa waxaa dheer, nidaamka deegaanka ee Apple waa la kordhinayaa adoo samaynaya laba qalab aad uga muhiimsan. Sida ay yiraahdaan, laba ayaa ka wanaagsan mid.
Waqtigan la joogo waxay umuuqataa inay tahay xanta kaliya falanqeeye. Laakiin ka fikirkeeda si macquul ah macno badan ayey sameyneysaa. In ka badan awood u lahaanshaha xakameynta saacadda lafteeda astaamahan cusub ee marin u helka. Waxay u muuqataa in iyaga loogu talo galay si loo xakameeyo qalab dibadeed. Muraayadaha Mac, iPhone iyo Apple, maxaa diidaya?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Sida ay sheegayaan wararka xanta ah, AssistiveTouch on Apple Watch waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo muraayadaha Apple
Daahfurka Apple Podcasts ayaa dib loo dhigay illaa Juun